AmaNgqina KaYehova Ancedisa Ekuyenzeni Ibe Ntle IRostov-on-Don, eRashiya
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBasque IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiCatalan IsiChichewa IsiChitumbuka IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHebhere IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKazakh IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiValencian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba isiZapotec (saseIsthmus)
AmaNgqina KaYehova Ancedisa Ekuyenzeni Ibe Ntle IRostov-on-Don
NgoMeyi 20, 2015, abasemagunyeni besona sixeko sikhulu esikumazantsi eRashiya, eRostov-on-Don, bakhupha ileta ewabulelayo newancomayo amaNgqina KaYehova ngomsebenzi awenzileyo wokusenza sibe sihle isixeko ngentwasahlobo.
Ngoxa ayelungisa iRostov-on-Don, amaNgqina KaYehova asuka kumabandla amane, aqokelela inkunkuma eyayisendleleni naselunxwemeni lwemilambo. Kwiiyure nje ezimbalwa, agcwalisa ooplastiki benkunkuma abayi-300 baza bayolahlwa ziilori.
Yintoni le yenza amaNgqina afune kangaka ukunceda ekuhlaleni? URaisa oneminyaka eyi-67 uthi: “Andikwazi kungakhathali. Ndifuna isixeko endihlala kuso sicoceke ukuze wonke umntu ahlale endaweni ecocekileyo. Nokuba bambalwa abantu abawubonileyo umsebenzi esiwenzileyo, ndisawuthanda lo msebenzi. Ngapha koko, uYehova uThixo uyawubona.” UAleksander wongeza ngelithi: “Asishumayeli nje qha ebantwini kodwa senza neminye imisebenzi eluncedo kubo. Ndiye ndivuye xa ikho into endinokuyenzela abamelwane bam.”
Abantu ebebebukele bebekuxabisa kakhulu ukuzincama kwamaNgqina KaYehova. Omnye umhlali ebothukile kukuva ukuba amaNgqina awabhatalwa ngomsebenzi awenzayo. Waqonda ukuba naye makakhe ancedise ekucoceni waza kamva wathi: “Andizange ndiyicinge into yokuba ndingakonwabela ukucoca ndize ndaneliseke kangaka ngulo msebenzi!” Waphinda wathi: “Abanye kuni abahlali nalapha, kodwa nikwazile ukuza kusicocela!”
Igosa lesixeko laphawula ukuba iqela nje elincinane lamaNgqina laqokelela inkukuma eninzi. Lawafota ecaleni kooplastiki ayewagcwalisile ukuze abonise abanye indlela yokuwenza lo msebenzi.”